(အရှင်ဉာဏိဿရ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
သီတဂူဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဉာဏိဿရ (၂၃ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉၃၇ မွေးဖွား) သည် မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၂၉၈ - ခု၊ တပေါင်းလပြည့်နေ့၌ အဖ ဦးမောင်ညို၊ အမိ ဒေါ်သန်းတင်တို့က ပဲခူးတိုင်း၊ ပြည် မြို့နယ် စီရင်စု၊ သဲကုန်းမြို့နယ် ပုတီးကုန်းမြို့တွင် ဖွားမြင်သည်။
ဆရာတော် ဒေါက်တာ အရှင် ဉာဏိဿရ
(1937-02-23) ၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၁၉၃၇ (အသက် ၈၃)
Vice Sangha Rājā of Shwekyin Nikaya
အနီးစခန်းဆရာတော် အရှင် ပန္ဒိတ
၂ သာသနာပြုလုပ်ငန်းများနှင့် ပရဟိတလုပ်ငန်းများ
၄ အစိုးရက ဆက်ကပ်သည့် ဘွဲ့များ
၅ ရေးသားပြုစုခဲ့သည့် စာပေများ
၁၉၄၄ ခုနှစ်တွင် သဲကုန်းမြို့၊ တပ်ရွာ အလယ်ကျောင်း၌ ဘုန်းတော်ကြီးပညာ အခြေခံများကို စတင်သင်ယူခဲ့ပြီး ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် ရှင်သာမဏေ၊ ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် ရဟန်းပြုသည်။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် စစ်ကိုင်းမြို့များတွင် အထက်တန်း ပိဋကတ်စာပေများကို လေ့လာသင်ယူဆည်းပူးခဲ့သည်။
၁၉၆၁ တွင် ဓမ္မာစရိယ စာချတန်းအောင်မြင်၍ သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယဘွဲ့ ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ တွင် သံဃာ့တက္ကသိုလ်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၅ တွင် ဗုဒ္ဓွသာသနာ ဒီပလိုမာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ ထိုနှစ်မှာပင် ဧရာဝတီတိုင်း လေးမျက်နှာမြို့၌ မြန်မာဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်း (B.B.M. College) ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၈ မှစ၍ စစ်ကိုင်းတောင်၌ ဗုဒ္ဓစာပေများကို စတင်သင်ကြားပို့ချခဲ့သည်။ ၁၉၇၂ မှစ၍ မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံခရိုင်၊ ပေါင်မြို့နယ်၊ ကျုံကရွာ သပိတ်အိုင်တောရကျောင်း၌ ၄ နှစ်ကြာ ပဋိပတ်အလုပ် အားထုတ်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၅ မှစ၍ မြန်မာပြည်အနှံ့ ဗုဒ္ဓဒေသနာများ ဟောကြားခဲ့သည်။
ဆရာတော်အား အစိုးရက မဟာဓမ္မကထိက ဗဟုဇနဟိတဓရဘွဲ့ (၁၉၉၃)၊ အဂ္ဂမဟာ သဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇဘွဲ့ (၁၉၉၅)၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတဘွဲ့ (၁၉၉၇)၊ အဂ္ဂမဟာ ဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များ ကပ်လှူပူဇော်ခဲ့ပြီး ၂ဝဝ၃ တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က ဒီလစ် (D. Litt.) ဘွဲ့၊ ၂ဝဝ၅ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မဟာချူလာလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်က ပီအိပ်ချ်ဒီ (Ph.D) ဘွဲ့ အပ်နှင်းခဲ့သည်။ မြန်မာနှစ် ၁၃၆၉-ခု၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၀၈-ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ နာလန္ဒတက္ကသိုလ်မှ ပီအိပ်ချ်ဒီ (Ph.D)ဘွဲ့ကို အပ်နှင်းခဲ့သည်။ မြန်မာနှစ် ၁၃၇၀-ခု၊ ခရစ်နှစ် ၂၀၀၉-ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ မဟာမကုဋ်တက္ကသိုလ်မှ ပီအိပ်ချ်ဒီ (Ph.D)ဘွဲ့ကို အပ်နှင်းခဲ့သည်။
အစိုးရက ဆက်ကပ်သည့် ဘွဲ့များပြင်ဆင်
၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် "မဟာဓမ္မကထိကဗဟုဇနဟိတဓရဘွဲ့တံဆိပ်တော်" ဘွဲ့ကို လည်းကောင်း ၊ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် "အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဘွဲ့တံဆိပ်တော်"ကို လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် "အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတဘွဲ့" ဘွဲ့ကို လည်းကောင်း အသီးသီး ရရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ "ဂုဏ်ထူးဆောင် စာပေပါရဂူဘွဲ့" (Doctor of Literature (Hononur-Causa)) ကို လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် "အဂ္ဂမဟာဂန္ထဝါစကပဏ္ဍိတဘွဲ့တံဆိပ်တော်" ဘွဲ့ကို လည်းကောင်း ဆက်ကပ်ပူဇော်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ ဥပ္ပါတသန္တိ စေတီတော် ပရဝုဏ်အတွင်းရှိ သာသနာ့မဟာဗိမာန်တော်ကြီးတွင် ကျင်းပခဲ့သော သာသနာရေးဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များ ဆက်ကပ်ပူဇော်ပွဲသို့ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး သီတဂူဆရာတော်အား သာသနာရေးဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံးဘွဲ့ဖြစ်သည့် အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရုဘွဲ့တံဆိပ်တော် ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ သာသနာတော်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များ ဆက်ကပ်ပူဇော်ပွဲ၌ အဘိဓဇအဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဘွဲ့တံဆိပ်တော်ကို ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦးမှ ဆက် ကပ်ခဲ့သည်။
↑ A Brief Biography of Dr. Ashin Nanissara။ Sitagu Buddhist Vihara။ Theravada Dhamma Society of America။ 10 March 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ သာသနာရေးဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များ ဆက်ကပ်ပူဇော်ပွဲသို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး သီတဂူဆရာတော်အား သာသနာရေးဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံးဘွဲ့ဖြစ်သည့် အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရုဘွဲ့တံဆိပ်တော် ကိုဆက်ကပ်လှူဒါန်း။ Eleven Media Group။ ၁၆ မတ် ၂၀၁၇ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ။ "၂၀၂၀ သာသနာတော်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များ ဆက်ကပ်ပူဇော်ပွဲ မဟာမင်္ဂလာ အခမ်းအနားကျင်းပ"၊ 9-3-2020။
သပိတ်အိုင်ဆရာတော် (သီတဂူ ဆရာတော်) ဒေါက်တာ အရှင်ဉာဏိဿရ ၏ အာနာပါန၊ သတိပဌာန္တရား (၁)
သပိတ်အိုင်ဆရာတော် (သီတဂူ ဆရာတော်) ဒေါက်တာ အရှင်ဉာဏိဿရ ၏ အာနာပါန၊ သတိပဌာန္တရား (၂)
သပိတ်အိုင်ဆရာတော် (သီတဂူ ဆရာတော်) ဒေါက်တာ အရှင်ဉာဏိဿရ ၏ အာနာပါန၊ သတိပဌာန္တရား (၃)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=သီတဂူဆရာတော်&oldid=513967" မှ ရယူရန်
၆ မေ ၂၀၂၀၊ ၁၀:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၆ မေ ၂၀၂၀၊ ၁၀:၅၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။